အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ခံတွင်းမြိန်ဖွယ် ကချင်ရိုးရာထမင်းနယ်
24 Responses to “ခံတွင်းမြိန်ဖွယ် ကချင်ရိုးရာထမင်းနယ်”
အယ်...ဆိုင်တောင် ကြေငြာပေးသွားသေး ကောင်းပေါ့.
အဲဒီ ဖက်ဖက်ရွက်လေးရဲ့ အနံ့လေးကို သဘောကျတာ ဒီမှာတော့ မကြာမကြာသွားစားဖြစ်တယ်... ။ ကချင် ဟင်းတွေပေါ့... အဲဒီ ထမင်းနယ် ရမလား မေးကြည့်ဦးမယ်.. မချော ပြင်ဆင်ထားပုံကတော့ တစ်ကယ့် သွားရည် တမြန်းမြန်း ကျမယ့်ကိန်းဗျာ။
ကချင်ထမင်းနယ်လေးကို စားသွားပြီ။ ဒီမှာလည်း ဖယ်ဖယ်ရွက်ကို အရမ်းသုံးကြတယ်။
စားချင်ထှာ ချောရေ...၊ အိမ်မှာ ထိုင်နေရင်းကို ဗိုက်က ခဏခဏဆာနေတော့တာ။ ရန်ကုန်ရောက်ရင် “မလိခူး”မှာ သွားစားကြည့်ပါမယ် ချောရေ ကျေးဇူးပါ:)
ကချင်ထမင်းနယ်လေးကို ၀င်စားသွားပါတယ်။ အမဘလော့ကို လာလည်တာ ကိုယ့်အိမ်လေးကိုပြန်ေ၇ာက်သွားသလိုပါပဲ ကချင်အစားအသောက်အကြောင်းတွေ၊ ဒေသအကြောင်းလေးတွေ ဖတ်၇တာ တော်တော်ကောင်းပါတယ်.။
အမရေ ညိမအမေ ကစစ်ကိုင်းတိုင်း အင်းတော်ကမိုအမရဲ ဟင်းတွေနဲ အကုံ ရင်းနီးတယ်။ စားခြင်လိုက်တာ။
မ ချောက၊ ဆိုင်ပါ ညွှန်ထားပါလား၊
ဒီထမင်းနယ်က ကိုယ့် ဖာကိုယ်တော့ 
စားချင်စရာလေး အမရာ။။။ ပြင်ဆင်ထားတာလေးက။။ ကချင်ထမင်းနယ်လေး တစ်နေ့နေ့တော့ စားဖြစ်အောင် စားဦးမယ်။။။ ဒီမှာတော့ ဖယ့်ဖယ်ရွက် ဝယ်ပြီး ငါးခေါင်းနဲ့ ပုံစံမျိုးစုံ ချက်တတ်သလို ချက်စားကြတာပဲ အမရေ။။။
───▄▄██▌█ ░░░░░░ ချော - ကချင်ထမင်းနယ်
စားချင်လွန်းလို့ ချောရဲ့ ကချင်ထမင်းနယ်ကို ကားနဲ့ သယ်သွားပီ ...
အမရေ သွားရည်တဗြန်းဗြန်း ကျသွားပါပြီ :)
ခုမှ ဆိုင်သိတော့တယ်။ ကျွန်တော်က ဂျာနယ်တစ်ခုထဲမှာ အဲဒီ ကချင် ထမင်းနယ် အကြောင်းဖတ်ပြီး စားချင်လို့ ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက် မြန်မာပြည် ပြန်တုန်းက ဆိုင်မသိလို့ ရန်ကုန်မှာ လိုက်ရှာလိုက်ရတာ နောက်ဆုံး ကန်တော်ကြီးထဲ ရောက်မှ တွေ့ တယ်။ စားလို့ တော့ကောင်းတယ် အစ်မ။ ဒါပေမယ့် ဈေးကြီးတယ်။ နောက်တခေါက် ပြန်မှ အစ်မချော ညွှန်တဲ့ဆိုင်ကို သွားစားဦးမယ်။
ပုံလေးက ဖျက်ပီး စားရက်ချင်စရာတောင် မရှိး)
ဒီနေ့ British Council မှာ စာအုပ်သွားပို့ပြီး ညနေ အပြန်တွင် ဘူတာမှာ ထိုင်ခုံလေးတွေ လွတ်တာတွေ့တာနဲ့ လေကလည်း တ၀ူးဝူးတိုက်နေတာဆိုတော့ ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ ထိုင်ပြီး မကြာမီမှာပဲ ဒီနေ့ ဆရာဟန်ကြည်တို့၊ ချောတို့၊ အံဋီတင့်တို့ပိုစ်အသစ်တင်တယ်ကွဆိုပြီး သတိရလာတော့ ချက်ချင်းထပြန်လာပါတယ်။
ချောရေ ဖက်ဖယ်ရွက်ဆိုတာ ကြားဖူးသလိုလိုတော့ ရှိတယ်။ ခုမှပဲ မြင်ဖူးတာ။ အရသာက ပူရှိန်းရှိန်းလေးပေါ့နော်။ ပင်စိမ်းပင်ကတော့ ဘုန်းဘုန်းတို့ဘက်မှာ ရွှေဖယုံသီးချက်တဲ့အခါ ထည့်သုံးပါတယ်။
သေ ချာ တာ ပေါ့ အရည်းတောင်းလက်ဘက်က တကယ်ကိုကောင်းဆိုသလို ကချင်ထမင်းနယ်လည်း တကယ်ခံတွင်းတွေ့တယ် ချောရေ့။
ပြန်လာလို့ကတော့ အဲဒီ မြေနီကုန်းဈေးလမ်းကို ရောက်အောင်သွားဦးမှာ . . .
မချော ဘလောဂ်လေးကို လာလည်ရတာ အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့ အလွမ်းတွေ ပြေသွားခဲ့တယ် မချောရေ ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ ရင်ထဲက အလေးအနက်ပြောခဲ့ပါတယ် ထမင်းနယ်လဲ အဝ စားသွားပါပြီ :)
မစားဖူးဘူးချောရေ..စားရင်တော့ကြိုက်မှာသေချာတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တာတွေချည့်ပါလို့ ။
မချော ရှိတာလေးနဲ့ အဲလိုသုပ်စားလည်းရမှာပဲနော်။
ပြင်ထားတာအားကြီးလှ၊ အော်စွန်းမှိုချဉ်စပ်သုပ် ရေးရင်းနဲ့တောင်စားချင်လာပီcmok cmok
ချော ညီမ ရေ
နှိုတ်စက်ပါနော် ကချင်ပြည်လိုက်ပြီးစားရအောင် မင်္ဂလာ သာ မြန်မြန်ဆောင်ပါတော့ဗျို့
မရွှေစင်ရဲ့ အဆိုကို အင်တိုက်အားတိုက် ထောက်ခံသွားပါကြောင်းဗျား...မြင်ရုံနဲ့တင် သွားရည်ကျအောင် တော်တော်လုပ်လွန်းလို့...
ကချင်ထမင်းနယ်ရိုးရာစာလေးက စားချင်စဖွယ်ပဲနော်။ အသုံးပြုရတဲ့ အဆာပလာတွေလည်း ရှာရတာ ခက်ခဲမှုမရှိတာမို့ စမ်းလုပ်ကြည့်မယ်စိတ်ကူးတယ် အခုလောလောဆယ်မှာ ချောရဲ့ကချင်ထမင်းနယ်လေးကိုအရင်အားပေးသွားတယ်နော်း
လုပ် စားချင်ကြည့်ပါအုံးမည် ..း)
နယ်ပြီးသား ထမင်းကို အရွက်လေးတွေနဲ့ ပုံဖော်ထားတာ မြင်လိုက်တော့ သဘောကျပြီး ပြုံးမိတယ်။ တော်တော် စိတ်ရှည်တာပဲ။